Valin’ny fitiliana faha-roa …. – Zaza no iriako
Anio 25 febroary taona 2015
Ny talata 4 novambra 2014
Rehefa niandry teo amin’ny iray volana teo izahay,dia tonga ny andro izay handrenesana ny valin’ny fitilina faharoa izay nataon’ny vadiko.
Tamin’ny 2 ora tolokandro ny fotoana, tonga aloha hatrany izahay, tebiteby hatrany no nisavovona tato aminay teo am-piandrasana ny fotona. Nampandroso arakin’ny mahazatra ny dokotera ka nampiresaka mandinidinika alohany hidirana amin’ny votoantony ny resaka.
Indrisy fa dia toa saika mitovy amin’ilay fitiliana voalohany ihany ny valiny. Teo koa nahafantranay fa ny azoospermia no mahazo ny vadiko. Mbola tsy naheno io anarana io aho,teny vaovao teo amin’ny sofiko io. Tsy voatanisa ny hakiviana sy alahelo nanakotsako ny foko nony naheno ilay voalaza,fanontaniana nipetraka tato an-tsaiko dia hoe Inona indray no azo atao manaraka e? Mbola misy ve ny dingana manaraka?
Misy vahaolana hatrany naroson’i Dr Cici dia ny hanaovana Biospy testiculaire na SSR ( TESA- TESE ),io ho izy fomba manaraka azo atao raha mazoto ianareo fa somary lafo ihany ,miakina aminareo ihany.
Inona moa ny atao oe SSR na koa Surgical Sperme Retrieval ? :
Alaina mivantana avy ao amin’ny testicule ny sperme amin’ny alalan’ny fitaovana ari-fomba. Fomba hafa azo ilazana azy koa ny oe TESA- TESE
Nazavainy aminay an-tsakany sy an-davany ny mety ho fizotran’ io fomba manaraka io. Nitraka indray izaho kivy teo, satria dia toa naha-velom-panantenana be ery ilay fomba fanazavany azy.
Tsy nisy firesahana manokana akoriny ny anay mivady fa avy dia nanaiky io dingana manaraka io, aleo velezina ny vy diany voa mahamay e! Nilaza izahay fa vonono ny hiroso amin’io dinga io.
Ny ampitson’ io ihany izahay dia nahazo taratasy izay milaza ny daty sy ny ora hanaovana an’ilay SSA.
Dia izay ny dingana vaovao hataonay, izay azo lazaina oe vahaolana farany raha ohatra ka te-hiteraka amin’ny vadiko aho…eny te-hiteraka amin’ny vadiko aho,izany faniriko goavana ato amiko, ato aminay……Iza moa no tsy manana faniriana ny hanan-janaka amin’ny vadiny e? Tsy mitsahatra aho manankina sy ny misaotra amin’ny Avo izay misy eo amin’ny fiainako,haiko fa tsy manary ahy Izy.
Isaorako anao hatrany koa ny manokana fotoana mamaky ny ny lahatsoratrako,eto no hany azoko izarako ny mavesatra ato amiko.